Teny fito: (4) – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 mai 16, 2012 mai 16, 2012 Un commentaire sur Teny fito: (4)
« Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoana no dia mahafoy Ahy Hianao? » Matio 7:46
Ny atrehintsika eto dia i Jesosy miresaka! Miresaka amin’iza? Miresaka amin’Andriamanitra. Mivavaka i Jesosy. Toa mahavariana ihany ny mieritreritra hoe Andriamanitra i Jesosy nefa mivavaka. Andriamanitra i Jesosy nefa nofo koa. Andriamanitra tonga nofo, miresaka amin’ilay Andriamanitra Ray. Asehon’i Jesosy eto ny maha-nofo Azy. Nofo mahatsiaro ny fahoriana mianjady Aminy, ary mitady ho voan’ny famoizam-po mihitsy aza: « Nahoana no dia mahafoy Ahy Hianao? ». Mahatsiaro ho irery Jesosy, ny mpianatra toa tsy hita ny antsoina, ny olona fantany rehetra toa lavitra Azy. Andriamanitra Ray ihany sisa no azony nantsoina, nefa eto indray dia tsaroany nahafoy Azy ny Ray, nahatsiaro ho irery Izy ka hoatran’ny nafoin’ny Rainy. Ny Reniny ara-nofo tsy nahavonjy Azy. Mafy loatra ny fahoriana entiny ka toa tsapany fa lavitra Azy koa ny Rainy. Rehefa misy zavatra mafy manjo, dia ny hoe dada na neny no voatonona aloha, fa ny an’i Jesosy eto dia Andriamanitra, sady Rainy, no voaantsony.
Efa niomana fatratra Jesosy talohan’izao fiatrehany ny ady sarotra izay mihatra aminy izao. Fitokanana nivavaka, tany an’efitra, tany an-tendrombohitra, ary niampy fiaretan-tory mihitsy izany.
Nefa mbola tsy zakany ihany ny hamafin’ny fahoriana mianjady Aminy, ka voatery mbola manandratra vavaka amin’ny Rainy ihany Izy. Asa na tsaroany hoe tsy mihaino ny Rainy fa voalaza eto fa NIANTSO tamin’ny feo mahery Jesosy! Efa fantatry ny Tompo ny lalana tsy maintsy hodiaviny, dia ny fahafatesana, nefa toa mafy Aminy loatra ny hirifiry mihatra Aminy! Ka niantso mafy an’Andriamanitra Izy. Ohatra asehon’i Jesosy amintsika izao ataony izao, ary izany no tokony hatao rehefa miatrika ady sarotra. Tsy misaraka amin’ny vavaka, miresaka amin’ny Ray mandrakariva. Izany ihany no mampaharitra antsika, ary ahazoantsika mamoa voa tsara, mendrika ny Tompontsika, dia i Jesosy Kristy. Mahareta ary amin’ny firaisana amin’ilay foto-boaloboka fa raha tsy izany ianao dia ho faty, ho maina ka hariana sisa no maha-mety anao, atao fampirehetana afo!
Fa raha maharitra amin’ny firaisana Aminy ianao dia handresy tahaka ny Tompontsika Jesosy Kristy, izay nandresy hatramin’ny farany, ka SANTATRA ho antsika. Izy no Paska ho antsika, niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny Fiainana, ary manala antsika amin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana mandrakizay.
Matokia fa efa naharesy Izy!
Izy anie hampahery anao!
Publié parfilazantsaramada mai 16, 2012 mai 16, 2012 Publié dansUncategorized
Teny fito: (3)
Herimino a dit :
mai 17, 2012 à 7:47
Mampahatsiaro ny teolojian’ny hazo fijaliana, indrindra izay hita ao amin’ny « Ethique et sanctification » nosoratan’i Jean Ansaldi, ilay « firaisana amin’ny foto-boaloboka » (union mystique avec le Christ) voalaza eto. Hoy i Ansaldi hoe : « C’est pour cela qu’il faut laisser toutes nos facultés en repos afin que Dieu travaille, qu’il faut se vider pour que Dieu remplisse », satria fanomezana avy aminy izany « firaisana » izany ka ekena amin’ny alalan’ny « sabbat des sens sans aucune action de notre part » (p.103).